That's so good, right?: Beach Fun
ကမ်းခြေတစ်ခုကိုသွားရတာ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ နေပူစာလှုံဖို့၊ သဲပြင်ပေါ် လမ်းလျှောက်ဖို့၊ ရေလှိုင်းတွေရဲ့ အနိမ့်အမြင့်ကိုခံစားဖို့ မဟုတ်ဘူးနော်။ အဲဒါလေးတွေက အပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေပါ။ ကျွန်တော်ဘာကို နှစ်သက်အပျော်ရွှင်ဆုံးလဲဆိုတော့ အများ ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို လက်ခံရရှိခြင်း။ ကျွန်တော်သိပါတယ် အဲဒါသွေးနားထင်ရောက်နေတဲ့ လေသံဖြစ်မယ်ဆိုတာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါအမှန်ပါပဲ။ တခြားနေပူစာလှုံသူများရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကျွန်တော် များသောအားဖြင့် အမိဖမ်းယူရရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်အချိုးအစားမရှိပါဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန်များတဲ့ ဟန်လည်းမပိုင်ဆိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကိရိယာလွတ်လေ့ကျင့်ခန်းအများအပြား လုပ်ပြီး ကြံ့ခိုင်အောင်တော့လုပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော့် မျက်နှာသွင်ပြင်ကလည်း သာမန်ပါပဲလေ သိပ်ပြီးမပေါ်လွင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ပြောနေပါစေ Speedo ဘောင်းဘီတစ်ထည်လောက်ကောက်စွတ်လိုက်တာနဲ့ လူအတော်များများ ကြည့်ဖို့ကောင်းလှတဲ့ ကျွန်တော့် အထုပ်အထည်ကိုမြင်ရမှာပါ။ ကျွန်တော့်လိင်တံဆိုဒ်က ပျှမ်းမျှလောက်ပဲရှိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခပ်ကြီးကြီးရွှေဥတွေက ၀န်းရံထားတာဆိုတော့ ကြည့်သူတွေရင်ထဲ Wow! ပေါ့။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ အနေဖြင့် သုံးလေးစက္ကန့်လောက် ကျွန်တော့်ဆီအကြည့်ကတော့ ရောက်ကြမှာပါ။ အသက်ကြီးကြီး (သို့) ငယ်ငယ်၊ အမျိုးသား (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီး ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်။ ကျွန်တော့်အနေနှင့် အာရုံစိုက်မှု ကို ခံစားရပါတယ်။ Gay တွေကတော့ ပြောမနေနှင့် မျက်စိကိုမလွှဲတော့တာ။ တစ်ချို့လူတွေဆို ကျွန်တော့်အထုပ်အထည်ကို ထိကိုင် (သို့မဟုတ်) လွတ်လပ်တဲ့နေရာဆိုရင် blowjob တော့လုပ်ပေးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က တခြားသောအရာမှ ပိုပြီးကျေနပ် ပျော်ရွှင်မိပါရဲ့။ straight အမျိုးသားတွေကို သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခြင်းလေ။
အဲဒီလိုလုပ်တာ ကျွန်တော့်အတွက်အမြဲကို turn-on ဖြစ်စေပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုချစ်ဖို့ပဲသိနေတဲ့ အမျိုးသားတစ် ယောက်ကို ကျွန်တော် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လက်ထပ်ပြီးအမျိုးသားဆိုရင် ကျွန်တော့်ကိုပိုမိုရင်ခုန်စေပြီး ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေကို ပိုပြီးရှာဖွေမိပါရဲ့။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က စမ်းသပ်ကြည့်ချင်လို့ (သို့မဟုတ်) တစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ် မဲ့နီးပါးဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလူတွေ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီကြည့်ဖို့တွေးမိကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသိပါဘူးလေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ခံရတာ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ straight အမျိုးသားတွေကို သွေးဆောင်ဖို့ Idea ရကတည်းက ကျွန်တော့်အတွက် ကစားပွဲတစ်ခုအသွင်ဆောင်လာပြီး ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်လာနေပါရဲ့။တခြားအမျိုးသားနှင့် လိင်ကိစ္စပတ် သက်မှု တစ်မျိုးမျိုးကို မရှိဖူးတဲ့ သာမန်ရုပ်ရည်ရှိသူ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို အမြဲတစေရွေးပါတယ် ကျွန်တော်က။ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စရပ် တွေတိုင်း သူတို့တွေမှာ အမျိုးသမီးအဖော်တစ်ယောက်ယောက် (သူ့မိန်းမ သို့မဟုတ် ရည်းစား)ရှိနေသူတွေပါ။ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီဆိုပါစို့ သူတို့လှဲနေတဲ့ သဲသောင်ပြင်နားမှာ ကျွန်တော့်တဘက်ကိုခင်း ပေါင်ခြံကို ကောင်းကောင်းမြင်စေမယ့် အနေ အထားနှင့် ကျွန်တော်လှဲလျောင်းလိုက်တာပေါ့။ သူ့အာရုံစိုက်မှုကို ရပြီဆိုတာကို ကျွန်တော် သိတာနှင့်တပြိုင်နက် ခပ်သွက်သွက်သူ့ အပြုံးတစ်ချက်ပေးကာ မတော်တဆသဘော ကျွန်တော့်ငပဲကို ပွတ်သပ်ပါတယ်။ နော်က်ဆုံးလုံခြုံစိတ်ချ သီးသန့်ဖြစ်မည့်နေရာဘက်ကို ဦးတည်ထလာလိုက်တာပေါ့။ များသောအားဖြင့် အဲဒီလူတွေ အမြဲတမ်းလိုလို လိုက်လာတာပါပဲ နောက်ကနေ။
ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပါပဲ ကမ်းခြေဘက် လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း အသက်၃၀အစပိုင်း အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိတယ်။ သူ့ အမျိုး သမီးလက်ကို ခပ်မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်လို့။ တိမ်ပြာပြာနေ့မှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နေကြတာ အတူတူ။ နာရီဝက်လောက်အကြာ သဲသောင်ပြင်ပေါ် သူ မလှဲခင်မှာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ အကြည့်တစ်ချက်ရောက်တယ်။ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတာက အနီရောင်တောက်တောက် Speedo ၊ အလယ်က အမြှောင်းကြီးကိုထင်းလို့။ သူကျွန်တော့်ကို သတိပြုမိသွားချိန် ဖြစ်ပျက်သွားတာကတော့ သူ့မျက်နှာပန်းသွေးရောင် ပြောင်း သွားသလို လည်တိုင်က သွေးကြောတွေခုန်သွားတယ်။ တံတွေးကို သူခက်ခက်ခဲခဲ မျိုချလိုက်ကာ သဲသောင်ပေါ်ကို မှောက်လိုက်ပါရော။ သူနေကာမျက်မှန်ဝတ်ထားပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေမယ်ဆိုတာ ပြောနိုင်ပါရဲ့။ သူ့မြင်ကွင်းမှာပဲ ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီ ကို ဟိုသည်ရွှေ့လုပ်နေတာ တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့တင်ပါးတွေဟာ သဲပြင်ထဲ ဖိကပ်ပြီးမသိမသာ လှုပ်ရမ်းသွားတာကို ကျွန်တော်သတိပြု မိတာပေါ့။ ကျွန်တော်ယူဆခဲ့တာက သူ့လိင်တံတောင့်တင်းပြီ၊ ခုံးထလာပြီ သို့မဟုတ် သူ့ငပဲကိုသဲပြင်ထဲသွင်းနေတာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်သတိဖြင့် ပြီးတော့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဖြစ်စွာ Speedo ဘောင်းဘီအနားစွန်းကို တစ်ချက်ဟလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲနှင့် ရွှေဥတွေ ကို သူ့ကိုမြင်စေလိုက်တာ အဲဒီဘဲရဲ့ မျက်နှာက နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းမှာ အတွန့်လေးတွေဖြစ်သွားတာ သတိပြုမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို အစွမ်းကုန်ရပြီးတဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အသွင်က ချောင်ကျတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေ့ဖို့ အရိပ်အယောင်ပေးဖို့ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်ကာ လူတွေ ငါးသွားမျှားတဲ့ဘက်ခြမ်းက သစ်ပင်တွေရှိတဲ့လမ်းကို မသိမသာညွှန်ပြလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ထရပ်လိုက်ကာ ဘေးတိုက်အနေအထားဖြင့် ကျွန်တော့်အထုပ်အထည်ကို သူ့အားကြည့်စေလိုက်ရင်း လမ်းသွယ်လေးဘက် ဦးတည်လိုက်ပါတယ်။
လမ်းသွယ်တလျှောက်မှာ ချုံပုတ်အထူကြီးတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်အရင်က တခြားလိင်စိတ်ကြွ အမျိုးသားတွေနှင့် ပုန်းကွယ်ခဲ့တဲ့နေရာ တွေလေ။ နည်းနည်းတော့ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဗျ။ အခြားသောလူတွေ လမ်းသွယ်ထဲဝင်လာခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ မသိမမြင်နိုင်ဘူးမဟုတ် လား။ ချုံပုတ်ထဲ ငါးမိနစ်လောက် ကျွန်တော်စောင့်နေသေးတယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကို မှားပြီးဆုံးဖြတ်မိခဲ့ရင် လမ်းသွယ်ထဲကပြန်ထွက် နောက်အသစ်တစ်ယောက်ကို ဖျားယောင်းရမယ်လို့တွေးမိပါရဲ့။ ကမ်းခြေဘက်ကိုလာ လမ်းအတိုင်း ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာ လူတစ် ယောက်နဲ့ တိုက်မိလုနီးပါးဖြစ်သွားမှ မော့ကြည့်မိတယ်။
'နောက်ကလိုက်ခဲ့' စကားတုန့်ပြန်မှုမရခင်မှာပဲ ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံများက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းယုံကြည်အောင်လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ ငြင်းဆန်မှုမရှိလိုက်လာမှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခပ်သွက်သွက် တစ်ချက်ကြည့်၊ ပြီးတော့ စိတ်ချရတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင်း လမ်းသွယ်လေးဘက် နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ကျွန်တော့်နောက်က တည့်တည့်။ ဘယ်သူ မှ မမြင်နိုင်တဲ့နေရာရောက်တော့မှ သူကျွန်တော့်ကို ကြောက်ကြောက်ရွံရွံ့နှင့် ကြည့်ကာစကားပြောပါရဲ့။
'ငါ Gay မဟုတ်ဘူးနော်'
'အိုကေ' ကျွန်တော် သူ့ကိုအပြုံးခပ်ကြီးကြီးပေးလိုက်ပါတယ်။
'မင်းငါ့ကိုကြည့်နေတာကိုမြင်တယ်....ပြီးတော့....အာ...ငါ gay မဟုတ်ဘူး'
'ကိုယ်သိတယ်. ပထမအကြိမ်ကတည်းက မင်းမှာဇနီးချောလေးရှိတယ်ဆိုတာကြားတယ်လေ'
ရုတ်တရက် သူဒေါဖောင်းသွားကာ ကျွန်တော့်ကိုအော်ပြောပါတယ်။ 'ငါ့မိန်းမကိုထိဖို့ မစဉ်းစားနဲ့နော်'
'ဒါဆို မင်းဘာလုပ်ချင်တာလဲ?' နည်းနည်းတော့ လေသံပျော့သွားပါပြီ။
'ကိုယ့်ဘောင်းဘီဆီ မင်းကြည့်ကြည့်နေတာကိုမြင်တယ်၊ မင်းပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ် ကြည့်ချင်မယ်လို့ ကိုယ်ထင်လို့'
သူ့တုန့်ပြန်မှုမရှိဘဲ ငြိမ်နေတာကြောင့် သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲကိုင်ကာ ကျွန်တော့်အထုပ်အထည်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ် လိုက်တာ အမြဲလို အန္တရာယ်များတဲ့ ရွေ့လျားမှုပါပဲ။ တစ်ခါတရံ ဂွင်ဖန်လာတဲ့ငနဲတွေကို ကြောက်လန့်သွားစေနိုင်သလို ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာမှမလုပ်ဖို့ ရပ်တန့်သွားတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ သူ့လက်ကို ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီပေါ် လက်တင်ပေးလိုက်တာ သူအညှစ် အပြုလည်းမလုပ် (ဒါမှမဟုတ်) ပွတ်သပ်တာလည်းမပြုပါဘူး။ ဒီအတိုင်းကိုင်ထားကာ အသက်ရှူသံပြင်းလာတာပဲ ရှိရဲ့။ ကျွန်တော့ တင်ပါးကို အားပြုရင်း သူ့လက်ဆီ ကျွန်တော့်ငပဲကို ဖိကပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီ ခပ်ကြပ်ကြပ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းက ကြီးထွား လာပါပြီ။
'မင်းဟာ အရမ်းကြီးတာပဲ' သူ့နှုတ်ခမ်းက ခပ်တိုးတိုးရွတ်တယ်။ 'ကြည့်ချင်လား အဲဒီဟာကို' သူခေါင်းကိုအသာငြိမ့်ပြတော့ ကျွန်တော် သူ့လက်ကိုအသာဖယ်လိုက်ကာ နောက်တစ်လှမ်းဆုတ်လိုက်တာပေါ့။ သူ့ကိုအကဲခတ်ဖို့။ သူ့ရင်အုပ်အလယ်ကနေ သူ့ဆီးစပ်ထိ အမွှေးနုလေးတွေတန်းနေအောင်ရှိသော ဆွဲဆောင်မှုမကင်းတဲ့သူပါပဲ။ ကျယ်ပြန့်သော ပခုံး၊ သန်မာသော ရင်အုပ်ဖြင့် တောင့်တင်းသော ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်ပေါ့။ သူဝတ်ဆင်ထားတာက သာမန်ရေကူး trunk ဘောင်းဘီတိုဖြစ်ပြီး အလယ်တည့်တည့်မှာ ဖောင်းကြွရုန်းကန်နေ ရော။ ကျွန်တော် သူ့ကိုခင်မင်ရင်းနှီးစွာပြုံးပြလိုက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။
'ငါ့မိန်းမရှိတဲ့နေရာနဲက သိပ်မဝေးဘူးနော်' ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြည့်ရင်းဖြေတယ်။
'မင်းမိန်းမဘယ်တော့မှ မသိနိုင်ပါဘူးကွာ။ ကိုယ်ဆိုလိုတာက သစ်တောထဲမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူရှိနေတာပါဆိုတာ ယုံကြည်အောင်ပြောဖို့ အကြောင်းပြချက်လိုလို့လားကွ' ကျွန်တော့်စကားကြားပြီး သူရယ်မောပါတော့တယ်။
'ငါလည်းမထင်ပါဘူးကွာ။ ဒီနေ့မနက်အထိကို အခုလက်ရှိအဖြစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ တွေးတောင်မတွေးမိခဲ့ဘူး'
'ဒါဆို ကိုယ်တို့ဘောင်းဘီတွေ တပြိုင်နက်ချွတ်မယ်, အိုကေ?'
သူစိတ်မပါလက်မပါ ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်သား ဘောင်းဘီတွေကို လျောချွတ်၊ ခြေထောက်တွေ ကိုကြွကာ ကောက်ကိုင်လိုက်ကြပါရဲ့။ လူတွေ စည်တဲ့ ကမ်းခြေနှင့် နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာလေးမှာ ကိုယ်တုံးလုံးအမျိုးသားနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ငပဲ တစ်ယောက် check နေကြတဲ့အဖြစ်။ သူ့ငပဲကအစွမ်းကုန်မာတောင်နေပြီ။ ကျွန်တော့်အထင် ၆လက်မလောက်ရှည် မယ်။ ထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားပြီး အပေါ်ကိုနည်းနည်းကော့သယောင်ပါ။ တော်တော်လှတဲ့အသားချောင်းတစ်ခုပါလား။ ကျွန်တော့်ငပဲက တော့ မပျော့မမာအနေအထားရှိနေသေးတာဗျ။ သူ့ကြည့်ရတာ ဒီအခြေအနေလေးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းကို ကြီးလှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အသွင်။ ကျွန်တော်မာတောင်တဲ့အခြေအနေမှာ လက်ရှိအခြေအနေထက် ရာခိုင်နှုန်းနည်းနည်းသာ ထပ်ကြီးနိုင်တာလေ။ ဒါပေမဲ့အစွမ်း ကုန်မာတောင်တုန်းက တိုင်းထားတာ ၇လက်မနီးပါးရှိတယ်။
'လုပ်ပါ....ကိုင်ကြည့်လေ' ကျွန်တော်သူ့ရှေ့ကိုတိုးသွားလိုက်တယ်။ သူ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပြန်ရဲ့။ ကမ်းခြေဘက်က နေ သည်ဘက်လမ်းသွယ်ထဲ လူအချို့လျှောက်လှမ်းလာရင်တောာင် ခြုံပုတ်တွေရှိတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ သူ့လက် ချောင်းတွေနှင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း -ီး တစ်ချောင်းလုံးကို စူးစမ်းတယ်။
ခပ်ဖြည်းဖြည်း ညှစ်ကြည့်ကာ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ကျွန်တော့်ပစ္စည်းပေါ် စတင်ကစားတော့တာ။ သူ့လက်နှင့် ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင် ရင်း ရှေ့တိုးနှောက်ဆုတ်လုပ်တာ အောက်ခြေကရွှေဥတွေနှင့်ထိခတ်ချိန်မှာတော့ ငပဲကိုလွှတ်ရွှေဥတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပွတ်သပ်တော့တာ ပဲ။ 'လုံးဝန်းပြီး ထွားလိုက်တာ' ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုသူတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်။
'မင်းလက်တွေက ကိုင်တာကျွမ်းလိုက်တာ' သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကျွန်တော်တည့်တည့်ကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာပေါ့။ သူ့လက်ချောင်းတွေ ကပြည့်ဖောင်းဖောင်း ပြီးတော့ သန်မာပြီးအားရှိမယ့်အသွင်။ ငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော့်ကို အသာထားရွှေဥတွေကိုသူ့လက်ချောင်း တွေနှင့် ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေရဲ့။ 'မင်းဒီထက်ပိုပြီး အနီးကပ်ကြည့်ချင်သေးလား?' သူမသိမသာတစ်ချက်ခေါင်းငြိမ့်ပြတာကြောင့် သူ့ပခုံး ပေါ်ကျွန်တော့်လက်တွေတင် ဒူးထောက်ထိုင်ဖို့ ဖိအားပေးလိုက်ပါတယ်။ ခပ်တန်းတန်း ကျွန်တော့်ငပဲဟာ သူ့မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်။
'ခင်ဗျားဥတွေထဲ သုတ်ရည်တွေနဲ့ ပြည့်နေမှာဗျ' သူကျွန်တော့်ကို ပြန်ကြည့်ရင်း တိုးတိုးပြောတယ်။ အဲဒီလိုပြောရင်း သူဟာဘာဆိုတာ ရယ် အခုဘာလုပ်နေတာရယ် သတိထားမိသွားဟန်နှင့် ခုန်ထပါရော။ 'ငါ အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး' ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ပစ်ချထားတဲ့ သူ့ ဘောင်းဘီကို ကုန်းကောက်တယ်။ ကျွန်တော့်ရှေ့ ကုန်းကောက်တာဆိုတော့ သူ့တင်ပါးအစုံဟသွားတာမြင်ရသလို အလယ်က အပျိုစင် ခရေပေါက်ကိုလည်း မြင်ရပါပေ့။ ဒီသစ်တောတန်းထဲက ခြုံပုတ်တွေဘက် ဆွဲဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့သမျှ အမျိုးသားတွေထဲ သူဟာ sexy အဖြစ်ဆုံး။ ကျွန်တော်သူ့ကို မသွားစေချင်ဘူး။
'ကျေးဇူးပြုပြီး မသွားပါနဲ့ကွာ' သူ့လက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကိုင်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ မင်းဘာမှ အမှားမလုပ်သေးပါဘူး သူကျွန်တော့်ဘက် ကိုပြန်လှည့်ပြီး မျက်နှာမူတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ကြောက်လှန့်နေပုံ။ ကျွန်တော့်ကိုမဟုတ် သူဘယ်လိုအနေအထားဘာဖြစ်နေခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို။
'ငါအဲဒါကို မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုလုပ်တာ မှားတယ်'
'မင်းစိုးရိမ်ဖို့ မလိုပါဘူးကွာ....ကိုယ်ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး'
ကျွန်တော်စကားကို အေးအေးသက်သာပြော မျက်နှာမှာလည်း အပြုံးဆင်ရင်း သူ့လက်က ဘောင်းဘီကို ယူလိုက်တယ်။ 'မင်းသွားချင် တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဆီက ဘောင်းဘီကိုယူ ဘာမှ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမဖြစ်ဘဲ ထွက်သွားပါ။ ဒါမှမဟုတ် မင်းဒီမှာနေပြီး ကိုယ့်ရွှေဥကနေ သုတ်ရည်တွေ ဘယ်လောက်ထွက်တယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့' သူချီတုံချတုံဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ပြန်ရဲ့။
'ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် မင်းဘာလိုချင်တာလဲ?' သူ့အပြောစကားကြောင့် သူ့ဘောင်းဘီကိုလှမ်းပေးလိုက်ရင်း စကားတုန့်ပြန်လိုက်တော့ သူ ဘောင်းဘီတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကို ငုံ့ကြည့်တယ်။
'တစ်ယောက်မှ မသိစေရဘူးလို့ ကတိပေး' သူ့အပြောက ကလေးဆန်ဆန်။ ကျွန်တော်ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူဒူးထောက်ပြန်ထိုင် ရင်း ကျွန်တော့်ငပဲကိုပြန်ကိုင်တယ် သူ့လက်တွေနှင့်။ ပြီးတော့ မမျှော်လင့်စွာ သူ့လျှာဖျားဖြင့် ကျွန်တော့်ငပဲအောက်ခြေကနေ ထိပ်ဖျား ထိ ကစားလိုက်တာ။ သူ့ရဲ့ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်သံကို ကြားလိုက်ရပါသေး။ 'ဒါမှားနေပြီ' ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အသားချောင်းကို လျှာဖြင့်လျက် ဆဲ။ အာခံတွင်းထဲ သွင်းလိုက်ပါတော့တယ် ခဏနေတော့။ သူ့ပါးစပ်က ကျွန်တော့်ငပဲမှာကစားနေစဉ် သူ့လက်ချောင်းတွေကကျွန်တော့် ရွှေဥကို ကစားလားကစားရဲ့။ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာက သူအရင်က -ီးမစုပ်ဖူးဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဆို ပါးစပ်တွင်းသွင်းရာမှာ အော့ အံမလို တစ်ချက်တစ်ချက် ဖြစ်ဖြစ်နေလို့လေ။ ဘာပဲပြောပြော ကျွန်တော်လက်ခံရရှိခဲ့သော blowjob တွေထဲမှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ခေါင်းကို ထိန်းကိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို အထဲရောက်နိုင်သမျှ ရောက်အောင်သွင်းပါတယ်။ သူ အာခံတွင်းထဲ အဆုံးသွင်းနိုင်တာ ကျွန်တော်အံသြရပါရဲ့။ ရုတ်တရက် သူဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အထင် သူထရပ်ပြီး အဝေး ကိုပြေးတော့မယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူမလုပ်။ ကျွန်တော့်ကိုမော့ကြည့်ပြုံးပြကာ စကားဆိုတယ်။
'ငါ...မင်း သုတ်ရည်တွေပန်းထွက်တာ ကြည့်ချင်ပြီ' သူခပ်သွက်သွက် ကျွန်တော့်ငပဲကို ကစားပေးကာ ရွှေဥတွေကို ပွတ်သပ်လိုက်ရင်း ဆိုရဲ့။
သူ့လက်တွေဟာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကျွန်တော့်ပစ္စည်းပေါ်ရွေ့လျားနေတယ်။ သူ့ရဲ့ပွတ်သပ်ခြင်းတွေဟာ ပြင်းပြနေသလို ကျွန်တော့်ရွှေဥ က အရည်တွေ ထိပ်ပေါက်ဝက တိုးထွက်ဖို့အသင့်ဖြစ်တည်လာစေပါရော။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုတွေနှင့် တုန်ခါနေ သလို အသက်ရှူသံတွေသည်လည်း ပြင်းပြလှိုက်မောနေပြီ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ထိပ်မှ သုတ်ရည် တစ်ပွက်ဟာ သူ့ မျက်နှာဆီ၊ ဒုတိယ သူ့ပခုံးဆီ၊ ပြီးတော့ သူ့မေးတွေ ရင်အုပ်တွေဆီပေါ့။ နောက်ဆုံး လက်ကျန်ကျွန်တော် ပန်းထုတ်ပြီးတာတောင် သူ့ လက်လှုပ်ရှားမှု (-ွင်းထု)ပေးနေတာကို ဆက်လုပ်နေတဲ့အပြင် ရွှေဥတွေကိုတောင်ဆွဲကြည့်နေသေးတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ အားမရသေး ဘူးနဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကိုကိုင်ပြီး ကစားနေချိန်မှာတော့ လှပတဲ့သူ့ဇနီးကို အာရုံမရတော့ဘူးထင်ပါ့။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့လက်ကို ကျွန်တော့်ငပဲကနေ ဖယ်ကာ မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက်နှာမှာ ထူးခြားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုပေါ်နေသလိုပဲ။ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှု၊ တုန်လှုပ်ချောက်ခြားမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ရောပြွမ်းနေခြင်းလေ။ သူ့ငပဲက မာတောင်နေဆဲ ထိကိုင်ချင်စရာကောင်းပြီး အဲဒီအရာကပေး တဲ့ ဖီလင်ခံစားချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။ ကျွန်တော် သွေးဆောင်ဖျားယောင်းပြီး သူ့လိုအလားတူလုပ်ခိုင်းခဲ့သူများကို တစ်ခါမှ မမေးဖူးတဲ့ မေးခွန်းတွေ သူ့ကိုကြတော့ မေးမြန်းမိပါရော။
'မင်းသွားတော့မလို့လား?' ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တော့ သူခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်။
'မင်းပစ္စည်းက အရမ်းမာပြီးထောင်နေတာ ဘယ်လိုပြန်နိုင်မှာလဲ?'
သူ့ရဲ့ပေါင်ကြားက ကြီးမားပြီးထွားနေတဲ့ ညီဘွားကို ငုံ့ကြည့်ရင်း ကျွန်တော့်အမေးကိုဖြေပါတယ်။ 'ငါရေချိုးခန်းဘက် တန်းဝင်ပြီး -ွင်း ထုမယ်လို့ တွေးမိတာပဲ'
'ကိုယ် ဒီထက်ကောင်းတဲ့ Idea ရှိတယ်, Fuck me!' သူခပ်သွက်သွက် ဦးခေါင်းကို ရမ်းပြပေမဲ့ မျက်ဝန်းတွေကတော့ စိတ်ဝင်စားမှု အပြည့်။
'မင်းဒီနေရာထိ လိုက်လာပြီးမှာောတ့ အသစ်အဆန်းဖီလင်လေးတွေ ခံစားသွားစမ်းပါ'
'ဘယ်သူတစ်ယောက်မှ မသိပါဘူး' ကျွန်တော် သူ့ဘက်ကို ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေလှည့်ပေးပြီး သူ့လက်အစုံကို ဆွဲကိုင်ကာ တင်ပါးနှစ် ဖက်ပေါ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
'ဒါပေမဲ့ ငါတို့မှာ ချောဆီမှ မရှိတာ' သူကငြင်းဆန်ချင်သေးဟန်ဖြင့်ပြောရဲ့။ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီနှင့်အတူပါလာတဲ့ ယူလာ တဲ့ တဘက်ခေါက်ကြားမှာ condomနှင့်အတူ ချောဆီအထုပ်ငယ်လေးတွေပါလာတယ်လေ။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူ့ငပဲ ရှည်လမျောမှာ စွပ်ပြီးသည်သာမက ကျွန်တော့်ခရေ၀မှာ ချောဆီရွှဲရွှဲဆွတ်ပြီးပေါ့။ သူအပေါက်ဝ ကို တေ့ပြီးဖိသွင်းချလိုက်တယ်။ သွင်းချက်ကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဟာ ရင်ထဲတိုင်နာသွားသယောင်၊ပြီးတော့ မယုံနိုင်ဖွယ် ကျေနပ် စေပါရော။ သူစပြီးလိုးကတည်းက ငြင်သာမှုမရှိ။ မွတ်သိပ်တပ်မက်တဲ့ ဆောင့်သွင်းချက်တွေက မြန်မှမြန်။ သူ့ပါးစပ်က '.....ကြပ်သိပ်နေ တာပဲ' ပြောပြီး ကျွန်တော့်ခရေ၀ထဲ ဆက်လက်ထိုးသွင်းပါတယ် သူ့ငပဲကို။ သူ့ကြည့်ရတာ နွားသိုးတစ်ကောင်ကျနေတာပါပဲ။ မိုင်များစွာ အပြေးနှင်လာသလို အသက်ရှူနေပြီးနောက် သူ့ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာဖြင့် ပန်းထုတ်ပါတော့တယ်။ သူ့အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပြီး ငပဲ ကိုရော condom ကိုရော ဆွဲထုတ်လိုက်တာမှာ ကျွန်တော့်ခရေ၀ကွဲကြောင်းတလျှောက် ချောဆီတွေ အများကြီးစီးဆင်းသွားရော။ ကျွန်တော့်သူ့ ဘက်မျက်နှာမူလိုက်တော့ မကြာခဏမြင်ဖူးနေကျ အပြစ်ရှိသော ခံစားချက်မျက်ဝန်းတွေကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် ခဏသော အချိန်မှာပဲ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုသာမက အားရသွားဟန်ကို သူ့အမူအရာတွေက သိသာပါရဲ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် စကားမဆိုကြဘဲ ကိုယ့်ဘောင်းဘီကို ကိုယ်ကောက်စွတ်ကြကာ လူမြင်ကွင်းက ပုန်းခဲ့ရာ ချုံပုတ်က ဖယ်ခွာလာကြပါတယ် လမ်း ကြောင်းမတူပေါ့။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် နှစ်ဦးသား ပင်လယ်ထဲ ခုန်ဆင်းကာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဘောင်းဘီတွေမှာ ပေကျံနေတဲ့ သုတ်ရည်တွေ ချွေးတွေကို ဆေးကြောကြပါတယ်။
ကျွန်တော် ရေကြည်ကြည် လှိုင်းလုံးတွေကြား အနားယူရင်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သော လူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူ့မိန်းမနှင့်အတူ သွား လေပြီ ကမ်းခြေမှတစ်ဆင့်။ အဲဒါ သူ့ကို ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းပါပဲ။
ဟူး.....ကျွန်တော်တို့တွေက ခဏတာ အပျော်ရှာကြတာပဲလေ.... နောက်တစ်ရက်ဆို သူလည်း ကျွန်တော့်ကိုမေ့....ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကိုမေ့ပေါ့....။
Alex Aung (8-12-10)